(Last Nohavaozina: 14/02/2020)
Avenue Victor Hugo dia làlana eo amin'ny faha-16 Arrondissement of Paris. manomboka eto Charles de Gaulle (fantatra koa amin'ny hoe ny Etoile) ary mifarana amin'ny Tattegrain (lasa Avenue Henri Martin). Izay anankiray amin'ny roa ambin'ny folo lahy karazana manomboka amin'ny Etoile, ary ny faharoa ny roa ambin'ny folo lahy lava indrindra, araka ny làlana de Champs Elysees.
Fan ny opéra? Dia malaza ity arabe any Paris no ho anareo! Izany eny an-dalana no misy ny Theater de Champs Elysees. Ny opéra dia ny an-trano ny asa lehibe roa orkesitra. Raha manana fotoana kely fanampiny, fahazoan-dalana mankany isika antoka fa handoa ny fitsidihana manan-tantara io fampisehoana toerana. Fanampin'izany, làlana ity dia hajaina noho ny maha zava-dehibe ny indostrian'ny lamaody. Maro ny marika malaza dia azo jerena ato anisan'izany Vuitton, Loewe, Celine sy more.
Vonona mba ao am-Paris? Ary eny an-dalana izany mila ho eo amin'ny lisitry ny 5 Malaza indrindra eny an-dalambe any Paris! Izany tena asezare, mavitrika lalana mamakivaky ny afovoan'i Paris, mitovy amin'ny renirano Seine. Atao hoe Napoléon voalohany taorian'ny fandresena amin'ny ady amin'ny Rivoli, Boulevard tsara tarehy io no misy ny Louvre sy ny Tuileries Garden. Royal Palace, fotsiny akaikin'ny Louvre, ny toerana tonga lafatra mba hanana andro iray avy ao amin'ny sunlit zaridaina. Izany no tonga lafatra eny an-dalana raha te-hahazo topimaso ny taloha aristocratic lafiny Paris. Tandremo sao tsy mahita izany!
Montmartre Nisy fotoana dia heverina ho lonaka ho an'ny vahoaka Paris kanto. Indrisy, vidiny ambony kokoa noho ny fizahan-tany efa nandroaka ny ankamaroan'ireo mpanakanto ho samy hafa manodidina. Misy afaka mahita ny Boulevard de Clichy an-trano izay ho an'ny Moulin Rouge sy Paris jiro mena distrika. Hahita Nightlife ary fotoana tsara tsy Matter firy ny andro misafidy ny fitsidihana. Diniho ny fitsidihana ny Moulin Rouge nijery ny fampisehoana cabaret!
Ataovy amin'ny toerana tena mpivady ny mandeha kiraro, ka mankanesa any Paris mba hahita ny 5 Malaza indrindra eny an-dalambe any Paris! Mila ny mitaingina? Nihevitra ianareo fa tsy manontany! Haka tapakila avy Save A Train, ankehitriny. You can book in seconds with no extra or hidden fees.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Streets Nalaza Indrindra Ao Paris To Jereo” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/famous-streets-paris/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)